အိန္ဒြာ: မြက်တွေ စိမ်းရွှေရွှေ ရနံ့တစ်ခုနဲ့ နုလို့
မြက်တွေ စိမ်းရွှေရွှေ ရနံ့တစ်ခုနဲ့ နုလို့
ခံစားချက် အပေါ်ယံကြောတွေ တင်းမာအေးခဲလာ...
အတွေးအခေါ်တွေက ငွေနံ့ကြေးနံ့နဲ့ ညှီဟောင်လို့
ငါကီးဘုတ်ရိုက်သံက ဇုလုတွေရဲ့ ဗုံသံလို..
ကိန်းဂဏန်းတွေ အမဲလိုက်အက ကခုန်နေကြတယ်..။
ငါ့ လည်ချောင်းတွေက ကျဉ်းမျောင်း
ငါ့ နှလုံးသားလည်း တဖြည်းဖြည်းကျုံလှီလာခဲ့ပေါ့
ငါ့သွေးကြောတွေထဲ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ ပျံ့နှံ့နေခဲ့ပြီ..။
ငါက အိမ်ကြီး တံစက်မြိတ်ကလေ..
ငေးမောအားကျနေရတဲ့ ရွှေရောင်ရင့်ရင့် တစိမ်းတရံစာ...
ငါဟာ..ကိုယ့်ခံစားချက်အပေါ် အဆိုးရွားဆုံးသစ္စာ ဖေါက်ခဲ့သူ
အိမ်အပြန်ချင်ဆုံးနဲ့ အိမ်ပြန်ဖို့ အကြောက်တတ်ဆုံးသူ..
မဝေခွဲတတ်အောင်.... ထူပိန်းဆွံ့အ ခဲ့သူပေါ့...
နည်းနည်းလေးမှ မလျော့တဲ့ ချစ်ခြင်းတရားတွေနဲ့
ကျွန်ုပ်လည်း အမိမြေကို ချစ်မက်ခဲ့ပါတယ်..။
Idea မဂ္ဂဇင်း ခုလထုတ် ( ဂျူလိုင်၊၂၀၀၉)မှာပါတဲ့ကဗျာလေးပါ..။ မဂ္ဂဇင်းမှာဖေါ်ပြထားတဲ့ ပန်းချီဆရာ ကိုသိုးထိန်းဆွဲတဲ့ သရုပ်ဖေါ်ပုံလေးကို လည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ သရုပ်ဖေါ်ပုံလေးလှမ်းပို့ပေးတဲ့ သတိတရစာမူတောင်းတဲ့ ချစ်မမ မနော်ဟရီ ကိုကျေးဇူးဥပကာရတင်ရှိပါကြောင်း..ဒီနေရာကမှတ်တမ်းတင်ပါတယ်..။ မဂ္ဂဇင်းကို..http://ideamagazine.blogspot.com/ ကနေဖတ်လို့ရပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ပါတယ်..။
ဟိုအထဲမှာလည်း ကြိုက်တဲ့ တစ်ပိုဒ်လေးရေးပြီးပြီမယ့် အခုလည်း နောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့ တစ်ပိုဒ်လေး ရေးဦးမယ်နော် ...မ
ကဗျာတစ်ပုဒ်လုံးကို ကြိုက်လို့ ...
တော်ရာမှာ နေရ ဆိုတဲ့စကားက
ခါးလိုက်တာ အစ်မရာ ...
မအိမ် စာတွေ အမျးကြီး ရေးနိုင်ပါစေ။
စာကောင်း၊ ကဗျာကောင်းတွေ အတွက် လေးစားလျက်
ကဗျာလေးရဲ့ ထုဆစ်ထားတဲ့ သရုပ်တစ်ခုနဲ့
ထင်ဟပ်မှုတစ်ခုကို သေချာ ဖတ်သွားတယ် ..။
Congratulations for the poem.
Btw, I am ready to have something for that. :)
မနော်ကမျက်နှာလိုက် ငါတို့ကျတော့ ကဗျာလည်း မတောင်းဘူး
ပထမ အပိုဒ်က လေးထောင့်ဆန်ဆန်အခန်းလေးထဲက ပညာတတ်တစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ ထောင်ချထားတဲ့ဘဝလေး တစ်ခုထင်ပါရဲ့
(ဦးနှောက် ကီးဘုတ် ကိန်းဂဏန်း)
အစိမ်းရောင်ဆိုတာ အတွင်းအပြင် ရိုက်သွင်းထားတော့ ကျနော် ဒီလိုမြင်ကြည့်တယ်
အဲဒီအရောင်က အေးချမ်းတဲ့အဓိပ္ပါယ် ထွက်သလို အပါယ်ခံဆိုတဲ့ အနက်လဲရတယ် ပြီးတော့ ခွဲစိတ် ခြင်းဖြစ်သလို ယုံကြည်မှု့လဲဖြစ်တယ် (အရေးပေါ် အခန်းထဲက ဆရာဝန်တွေလိုပေါ့) ဒီမှာအဆိပ်နဲ့ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ သုံးထားတော့ ဆိုလိုချင်တာ ပစ်ပယ်ခံရတဲ့ ဒါမှမဟုတ် အခြေအနေတစ်ရပ်ရပ်ကြောင့်
ဆန္ဒနဲ့ ဘဝ တစ်ထပ်ထဲဖြစ်မလာတော့တဲ့ အခြေအနေမှာ လျော်ဖွတ်လို့မရတော့တဲ့
သူ့ကိုယ်ကြပ် အဝတ်တွေကို ပြန်ကြည့်မိလိုက်သလိုပါ၊
အခြေအနေတွေအားလုံး ဘာသာမြင်မိလိုက်တဲ့၊ အသုံးတည့်ရုံသက်သက် အပိုပစ္စည်းလေးတစ်ခုရဲ့ ခပ်ဝါးဝါးအိမ်မက်ပေါ့၊
ဖွက်ထားတဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ဇတ်သိမ်းအတွက် တမင် အကွက်ဆင်ချပြလိုက်တာပါ
ဒါမှလဲ လိုချင်တဲ့ အားလုံးသက်ဆိုင်မှု့ကို
ကျွန်ုပ်လည်း အမိမြေကို ချစ်မက်ခဲ့ပါတယ်..။"
ရေးသူနှင့်တိုက်ဆိုင်ချင်မှတိုက်ဆိုင်ပါမည် ကျနော့် ခံစားကြည့်ခြင်းသက်သက်ပါ။
ဒါပေမယ့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကတော့ အနှောင့်အယှက်တစ်ခုပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့အချစ်တွေက မလျော့နည်းပါဘူး..ဒါပေမယ့် အိမ်ပြန်နောက်ကျနေတုန်းပဲ..။
နီရူဒါနှလုံးသားနဲ့ စက်ရုပ်တယောက် ကဗျာလာဖတ်သွားတယ်အစ်မ။
တစ်ခါတစ်ခါမှာတော့ နိရူဒါကို အားကျမိတယ်...။
သူမကို အသစ်ပြန်စိုက်လိုက်တဲ့ သစ်ပင်
သူမ ကောင်းကင်ယံထဲက ကျွန်တော့်ဆွံ့အ ကြယ်(၃)
သူမ ကောင်းကင်ယံထဲက ကျွန်တော့်ဆွံ့အ ကြယ်(၂)
သူမ ကောင်းကင်ယံထဲက ကျွန်တော့်ဆွံ့အ ကြယ် (၁)